Global Voices teny Malagasy » Voaheloka Dimy Taona Sy Efa-Bolana An-tranomaizina Ilay Ethiopiana Bilaogera Sady Mpikatroka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voaheloka Dimy Taona Sy Efa-Bolana An-tranomaizina Ilay Ethiopiana Bilaogera Sady Mpikatroka
Voadika ny 18 Mey 2016 11:52 GMT 1	 · Mpanoratra T Tekle Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sary avy amin'ny sary fototr'i Zelalem Workagegnehu nataon'i Melody Sundberg. Nahazoana alàlana.
Nosazian'ny Fitsarana Avo Federaly Ethiopiana dimy taona sy efa-bolana an-tranomaizina” rehefa notsaraina narahana adihevitra ela ilay tanora bilaogera sady mpikatroka Ethiopiana Zelalem Workagegnehu .
Mpiaro ny zon'olombelona sy manam-pahaizana i Zelalem, izay nandray anjara tsy tapaka tamin'ny tranonkala any am-pielezana DeBirhan .
Heverina hampakatra ny fitsarana izy noho ny didy nivoaka.
Tazonina ao amin'ny fonjan'i Kilinto ao an-drenivohitra Addis-Abeba i Zelalem amin'izao fotoana izao.
Na izany aza, matahotra ny fianakaviany sy ny namany fa ho hafindra any amin'ny fonjan'i Ziway izy, izay any amin'ny 160 kilaometatra atsimon'ny renivohitra Ethiopiana.
Tamin'ny 15 Aprily, nanafaka  madiodio ny olona roa niara-voaheloka tamin'i Zelalem ny Fitsarana Avo Federaly Etiopiana: i Yoantan Wolde sy i Bahiru Degu, izay nandany 600 andro mahery tany am-ponja noho ny fiampangana azy ireo ho nanao fampihorohoroana, nanamarina ireo antony ara-politika ny tsikera.
Na izany aza, hita fa meloka tamin'ny “fanohanana ny fampihorohoroana” nanana rohy tamin'ny Hetsika Ginbot 7 i Zelalem Workagenehu , izay antoko politika mpanohana ny demokrasia naorin'ny Profesora Berhanu Nega  , ary nomen'ny governemanta Ethiopiana anarana tamin'ny 2010 hoe “fikambanan'ny mpampihorohoro” .
Voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny fanonganana ny governemanta izy (nanampy tamin'ny fanamorana ny fianarana fiarovana nomerika) sy nanaparitaka vaovao tsy marina (nanoratra tsy tapaka tao amin'ny tranonkala an'ny any ampielezana izay iray amin'ireo sisa manana loharanom-baovao azo antoka amin'ny zava-mitranga ao Ethiopia izy).
Araka ny tatitra, nilaza ny mpitsara fa meloka izy tamin'ny fanangonana mpikambana hanomboka revolisiona tahaka ny Lohataona Arabo ao Ethiopia sady nanamora ny fidirana tamin'ny fianarana fiarovana nomerika izay fantatry  ny fanjakana mpampanoa lalàna ho “fianarana hanao fampihorohoroana an'i Ethiopia.”
[mg] Voampangan ‘ny Fanambarana Miady amin'ny Fampihorohoroana  izay lalàna nolaniana tamin'ny volana Jolay 2009 tao Ethiopia, i Zelalem niaraka tamin'ny olona sivy hafa, . Manohana ilay lalàna ny manampahefana ary nilaza fa nalaina maodely avy amin'ny lalàna efa misy ao amin'ny firenena toy ny an'ny Fanjakana Britanika izany.
Tamin'ny Oktobra 2014 i Zelalem no voampanga voalohany, niaraka tamin'ny olona sivy hafa voarohirohy izay nahitana mpisera aterineto, politisianina mpanohitra, sy mpikatroka. Hatreto, noafahana madiodio ny olona fito amin'ireo olona rehetra ireo rehefa nandany herintaona mahery tany am-ponja.
Nilaza tamin'ny fitsarana i Zelalem sy ireo niara-voaheloka taminy fa niaina fampijaliana lehibe  izy ireo tany am-ponja.
Noterena hanao sonia taratasy fitanisan-keloka i Zelalem nandritra ny fitazonana azy tany am-ponja. Noho ny kapoka sy ny fampijaliana, milaza i Zelalem ankehitriny fa manaintaina azy mafy ny masony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/18/82620/
 Nosazian'ny : http://debirhan.com/?p=9457
 Zelalem Workagegnehu: http://www.untoldstoriesonline.com/zelalem-workagegnehu-the-humble-activist/
 Ginbot 7 : https://en.wikipedia.org/wiki/Ginbot_7
 Berhanu Nega: https://en.wikipedia.org/wiki/Berhanu_Nega
 [mg] Voampangan: https://mg.globalvoices.org/2015/09/24/74924/
 Fanambarana Miady amin'ny Fampihorohoroana: http://www.refworld.org/docid/4ba799d32.html
 niaina fampijaliana lehibe: https://mg.globalvoices.org/2016/05/03/82158/